Otu esi ewepu ntutu ihu na-adịgide adịgide - Ntutu Isi
Otu esi ewepu ntutu ihu na-adịgide adịgide
How Get Rid Facial Hair Permanently
1. Gịnị Bụ Hirsutism? Etu esi ewepu ntutu isi a di oke?
abụọ. Gini bu ihe kpatara otutu ntutu ji eche ihu?
3. Denagide Ọnọdụ Ahụike Na-akpata Nnukwu Ntutu Ntutu Nzọụkwụ mbụ iji wepụ ntutu nke ihu oge kpamkpam?
Anọ. Nwere ike DIY Home ịgba akwụkwọ tufuo Ihu Ihu na-adịgide adịgide?
5. Nwere ike Electrolysis Nwere Ike Helphapụ Ihu Ahụ Na-adịgide adịgide?
6. Nwepu ntutu ntutu laser nwere ike inyere aka n'iwepụ ntutu ihu?
7. Ime Ihu Anme Nhọrọ Bụ Maka Iji Bibie Ntutu Ihu?
8. Ajụjụ: Otu esi ewepu ntutu ihu na-adịgide adịgide
May nwere ike ijigide usoro ịma mma siri ike, mana enwere otu ihe na-ajụ naanị ka a chịkwaa gị. Anyị na-ekwu maka ntutu ihu achọghị. Oge ụfọdụ anyị na - ata ahụhụ site na uto oke ma anyị na - achọpụta na anyị enweghị otu esi tufuo ntutu ihu (nke na-adịkarị njọ ma gbaa ọchịchịrị) kpamkpam. Ọ baghị uru ikwu, ntutu ihu nwere ike iwetu obi ihe ọmụmụ na-emetụ n'ahụ na-egosi na ụmụ nwanyị na-enwe oke ntutu ihu na-ekwukarị ọkwa nke nchegbu. Nnyocha e mere na 2006, nke emere na UK, gosiri na, ná nkezi, ụmụ nwanyị nwere ntutu ihu na-etinye ihe karịrị otu awa na ọkara n’izu n’ịgbalị igbochi nsogbu ahụ. Yabụ, kedu ụzọ dị mfe ma dị irè nke esi iwepụ ntutu ihu ihu kpamkpam ? Nke a bụ lowdown.
Ihe mbụ ị ga - achọ ịma iji hirsutism gụnyere. Hirsutism bụ naanị oke ntutu na ihu gị ma ọ bụ n'akụkụ ahụ gị. Ohaneze, ọ na-emetụta ụmụ nwanyị ihe ọmụmụ na-egosi na otu n'ime ụmụ nwanyị 14 nwere hirsutism. Nwere ike ịnwe oke hirsutism ma ọ bụrụ na uto nke ntutu dị oke na oji, ọ bụghị nke ọma ma dị gịrịgịrị. Mgbe ụfọdụ, ihe mgbaàmà ndị na-esochi nke hirsutism nwere ike ịgụnye nsọ nwanyị na-adịghị arụ ọrụ, akpụkpọ mmanu na pịmpụl. Nzọụkwụ mbụ ị na - eme banyere ịnagide hirsutism bụ ịjụ dọkịta nwere ike ịgwa gị ka ị gabiga ọtụtụ nyocha ahụike iji lelee ihe kpatara hirsutism na mbụ. Knowingmara ogo nke hirsutism ga-enyere gị aka ịhazi otu ị ga-esi kpochapụ ntutu ihu ihu kpamkpam.
Ndụmọdụ: Gaa dọkịta ka ị mata ogo hirsutism ị na-arịa.
2. Gini bu ihe kpatara otutu ntutu ji eche ihu?
N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-ekwu na hirsutism bụ njupụta nke homonụ nwoke a na-akpọ androgens. Hormonal ahaghị nhata na-ata ụta maka ụdị ntutu a. Ihe ndi ozo gunyere hyperplasia adrenal congenital (onodu onodu ogwu nke na emetuta gland), oke ibu ma obu ibu di ngwa ngwa na ihe oriri nke steroid nke anabolic nke ndi choro iru akwara. Mana PCOS (polycystic ovary syndrome) ka ekwuru na ọ bụ ihe kachasị akpata oke ntutu na ihu gị ma ọ bụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ gị.
Ndụmọdụ: Tupu ị na-ahọrọ ọ bụla ogologo ọgwụgwọ megide ntutu ihu , mara ihe na-akpata gị nsogbu. Nke ahụ nwere ike inyere gị aka ịchapụta atụmatụ maka iwepụ ntutu ihu ihu kpamkpam .
3. Denweta Ọnọdụ Ahụike Na-akpata Ọganihu Ntutu Oké Nzọụkwụ Mbụ Iji Bibie Ntutu Ihu Ihu mgbe niile?
Ọ bụrụ na ịnwee ọnọdụ ahụike nke na-eduga na oke ntutu, ị kwesịrị ị gbalịsie ike igbochi ọrịa ahụ na mbụ. Nnyocha na-egosi na PCOS na-ede ihe dịka 72 ruo 82 pasent nke oke uto ntutu. Yabụ, ọ bụrụ na achọpụtala na PCOS, ịkwesịrị ịnagide nsogbu ahụ na ntọala agha. E nwere ụzọ dị iche iche esi agwọ ọrịa. Ọ bụrụ n ’ibu ibu ma bụrụ onye a chọpụtara na PCOS, ibula ibu site n’inwe ndụ dị mma ga - enyere gị aka ịchịkwa oge ịhụ nsọ gị. Ndị ọkachamara na-ekwu na ifelata ibu na-ebelata ogo insulin gị, na-ebute ọkwa testosterone dị ala, nke n’aka nke ya ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka ịmụ nwa abawanye kamakwa ọ na-ebelata mgbaàmà ndị a na-ahụ anya dịka uto ntutu na otutu.
A na-edekarị ọgwụ mgbochi ime ọnụ maka PCOS. Ewezuga nke a, ọgwụ ọgwụ hormone iji belata testosterone ma kpalite ovulation na ọgwụ, dị ka metformin, iji na-agwọ ọrịa shuga ka edepụtara. Gerywa ahụ iji wepu cysts buru ibu ma bibie anụ ahụ na-emepụta androgens na-ewerekarị dị ka nhọrọ ikpeazụ.
Ndụmọdụ: Mmega ahụ, rie ahụ ike ma lụso oke ibu ọgụ iji chịkwaa nsogbu PCOS.
ụdị mkpụrụ osisi oroma
4. Nwere ike DIY Home ịgba akwụkwọ tufuo Ihu Ihu na-adịgide adịgide?
Ọ nwere ike ọ gwụla ma ị nwere oke hirsutism. Kama usoro kemịkal siri ike megide ntutu ihu, usoro ọgwụgwọ a dị mfe ma dị mma nwere ike inyere gị aka n'ezie tufuo ntutu ihu gị kpamkpam :
Chickpea ntụ ọka nkpuchi
Na efere, gwakọta ọkara otu iko nke chickpea ntụ ọka, 2 tsp nke uzuzu turmeric, ọkara otu tsp nke ude ohuru na ọkara otu iko mmiri ara ehi iji mepụta mado. Tinye na mpaghara ebe ntutu na-apụta nke ọma ma chere maka nkeji 20-30. Ghichaa nwayọ na ntụgharị ihu nke ntutu isi wee jiri mmiri keara seara sachaa. Maka nsonaazụ kacha mma, jiri ngwugwu a ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu.
Pọọpọ na nkpuchi turmeric
Na efere, gwakọta 2 tbsp nke pọọpọ pọpọ, ½ tsp nke ntụ ntụ na 5 tbsp nke aloe vera gel iji mepụta mado. Tinye ntanye na mpaghara na-egosi uto ntutu na-achọghị. Hapụ ya maka nkeji iri abụọ ruo mgbe akọrọ. Wepu nke a site na ihicha ya na uzo ozo nke ntutu.
Gram ntụ ọka na bilie mmiri
Were 3 tbsp nke ntụ gram na-acha akwụkwọ ndụ, otu mmiri nke mmiri rose na otu tsp ihe ọ lemonụ lemonụ lemon ma gwakọta ha nke ọma na nnukwu efere. Tinye na ebe a na-ahụkarị uto ntutu. Chere nkeji iri atọ ma ọ bụ karịa ma ọ bụ ruo mgbe ọ kpọnwụrụ kpamkpam. Ghichaa ihe nkpuchi ahụ na mmegharị okirikiri.
Mmanụ a lemonụ lemon nkpuchi
Gwakọta ihe ọ juiceụ juiceụ nke lemon dum na ọkara nke mmanụ a honeyụ iji mepụta ezigbo mado. Tinye ngwakọta na mpaghara emetụtara ma hapụ ya maka nkeji 20-25. Nke a ga - enyere aka mee ka ntutu na - achọghị dị ka lemon nwere ihe na - agba agba.
Banana na oatmeal sikrob
Gwakọta otu banana a mịrị amị na teaspoons atọ nke oatmeal na nnukwu efere. Hịa aka na ihu gị maka minit 15-20 na ntụgharị okirikiri wee jiri mmiri saa ya. Maka nsonaazụ kacha mma, jiri nkpuchi ahụ ugboro abụọ n'izu.
Nri osikapa, turmeric na mmiri ara ehi
Were 3 osikapa ntụ ọka osikapa, otu tbsp nke turmeric ntụ ntụ na 2 tbsp nke mmiri ara ehi. Gwakọta ihe niile agwakọta ọnụ. Tinye mmiri, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Tinye ihe nkpuchi a na ebe emetụtara ya ma chere 30 nkeji. Ozugbo ọ kpọrọ nkụ, sachaa mmiri keara luara.
Mmiri Rose, mmanụ oliv na alum
Were ntakịrị alum, otu tbsp nke mmiri rose na otu ngaji mmanụ oliv. Gwakọta ihe niile - jide n'aka na alum (gbanwee ya na ntụ ntụ) na-agbaze na mmiri rose. Tinye na mpaghara emetụtara na bọọlụ owu. Chere ruo mgbe ọ kpọrọ nkụ kpamkpam. Tinye akwa ọzọ ma chere ruo mgbe akọrọ. Tinyegharịa a ugboro isii. Saa ma hichaa anụ ahụ na moisturizer ma ọ bụ ole na ole tụlee nke olive mmanụ.
Akwa na ọka ntụ ọka
Gwakọta 2 tsp shuga na otu tsp nke ọka ọka na otu akwa iji mepụta akwa mado. Tinye ya na ihu ma hapụ ya ka ọ kpoo 15-20 nkeji. Bechapu ya nwayọ ozugbo ọ kpọnwụrụ, ma megharịa ugboro atọ n'izu maka nsonaazụ kachasị.
Ọka bali na mmiri ara ehi
Gwakọta 2 tbsp nke ntụ ọka bali na otu mmiri ara ehi na ihe ọ lụ lụ wayo iji mee mado. Tinye na ihu gị, ma hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ maka minit 20. Jiri mmiri keara ara saa anya.
Gelatin na mmiri ara ehi
Were 2 tbsp nke gelatin ntụ ntụ, 4 tbsp nke mmiri ara ehi na ole na ole tụlee nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon. Gwakọta niile ma kpoo ngwakọta ihe dị ka sekọnd 30. Mee ka ngwakọta ahụ dị jụụ ma tinye ya na ihu. Chere maka nkeji iri ma kpachapu ya. Egbula nkpuchi a ma ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ anụ.
Lavender mmanụ na mmanụ tii
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ngwakọta nke mmanụ dị mkpa nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe nkpuchi ntutu ihu. Were 2 tsp nke mmanụ lavender na 8 tụlee nke mmanụ tii na-agwakọta nke ọma na obere efere. Tinye okpukpu abụọ kwa ụbọchị na mkpuru owu. Mmanụ ndị a dị mkpa na-eme ihe megide androgens ma nwee ike igbochi uto ntutu.
Lentils, nduku na mmanụ a honeyụ
Kwesiri ọkara iko iko lentil odo, poteto, tụlee ole na ole nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon na otu tsp mmanụ a honeyụ. Ghaa lentil ahụ n’abalị ọ bụla ma mee ka ọ ghọọ nnukwu mpe n’ụtụtụ. Mgbe ị gbachasịrị poteto ahụ, jiri ihe nhazi wepụta ihe ọ juiceụ juiceụ na ya. Gwakọta lentil paste na poteto ihe ọ juiceụ togetherụ. Tinye ihe ọ lemonụ lemonụ lemon na mmanụ a honeyụ. Tinye na mpaghara ndị emetụtara ma chere ihe dị ka ọkara elekere. Ozugbo nkpuchi ahụ kpuchiri kpamkpam, jiri mkpịsị aka gị hichaa ya.
Ndụmọdụ: Gbalịa iji nke ọ bụla n’ime ihe nkpuchi ndị a maka iwepụ ntutu ihu ọ dịkarịa ala otu ugboro n’izu.
5. Electrolysis Nwere Ike Inye Aka Na Iwepụ Ihu Ihu Kpamkpam?
Electrolysis bu usoro ama ama nke ikpochapu ntutu ihu kpamkpam. N'ụzọ bụ isi, n'oge electrolysis, a na-etinye ngwaọrụ epilator n'ime akpụkpọ ahụ ma tinye ụda redio dị mkpụmkpụ iji mebie ntutu nke ntutu ma gbochie ntutu ọhụrụ ka ọ ghara itolite. Nweghị ike iwepụ ntutu dị ogologo oge site na electrolysis naanị otu ịnọdụ ala ị ga-achọ ọtụtụ ndị na-esochi iji tufuo ntutu ihu na-adịgide adịgide. Ma ọ bụrụ na ị nwere ndidi, na ego ị ga-ebu, electrolysis nwere ike inye gị nsonaazụ achọrọ, dị ka ndị ọkachamara si kwuo. Ihe ọzọ bụ na ọ bụ usoro mmezi dị ala.
Ma agala maka electrolysis na-enweghị ịkpọtụrụ ọkachamara kwesịrị ekwesị. Chọrọ onye ọkachamara ọkachamara maka ọgwụ maka usoro a. Ọ bụrụ na ejiri mkpịsị aka na-enweghị eriri, usoro a nwere ike ibute ọrịa siri ike.
Ndụmọdụ: Achọrọ ọkachamara maka dermatologist maka electrolysis.
6. Nwepụ ntutu ntutu laser nwere ike inyere aka n'iwepụ ntutu ihu?
Mwepu ntutu laser bụ ụzọ ọzọ a na-ewu ewu nke isi wepụ ntutu ihu kpamkpam. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịghọta ihe zuru oke nke iwepụ ntutu laser tupu ịhọrọ ya. N'ụzọ bụ isi, iwepụ ntutu laser na-agụnye ntinye nke radieshon dị nro site na enyemaka nke ọkụ ọkụ dị elu. Principlekpụrụ bụ isi bụ, ọ dị mkpa imebi ahịrị ntutu iji gbochie uto ntutu kpamkpam. Ọzọkwa, nke a chọrọ ọtụtụ ndị na-eso ụzọ iji nweta abamuru ogologo oge. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịbụ usoro dị oke ọnụ. Nke ato, ịchọrọ usoro nlekọta mgbe emechara. Dịka ọmụmaatụ, enweghị mgbatị, etemeete, spa ma ọ bụ saunas maka gị mgbe ọgwụgwọ laser gasịrị. Ga-ejikwa ngwaahịa a kapịrị ọnụ nke ọkachamara gị na-atụ aro ka ịchọrọ izere nsị, glycolic acid na retinol creams. Ihe ọzọ na-egosi ịkpachara anya: Laser abụghị 100 pasent na-adịgide adịgide, ntutu nwere ike ịpụta ọzọ mgbe oge ụfọdụ gasịrị.
7. Ime ihu na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ maka ikpochapụ ntutu ihu?
Enwere ike ịgwa gị ka ị tụlee ịme ntutu dị ka nke ikpeazụ nwere ike iwepụ ntutu site na mgbọrọgwụ ya. Ọ bụrụ na ị nwere nkà, ị nwere ike ime nke a n'ụlọ, mana a na-emekarị ya dị ka usoro salonlọ Mmanya. Ọ dịkwa oke ọnụ, na-emegide usoro iwepụ ntutu isi na-adịgide adịgide, ọ dịkwa mfe ebe ọ bụ na a na-ewepụ otu ntutu dị iche iche n'otu oge. Ọzọkwa, na oge ụfọdụ, ịme waksị nwere ike nweta ntutu na-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na follicle na-ebelata oke. A na-etinye wax soft (nke a kwadoro maka iji ịchọ mma) mee ihe na mpaghara achọrọ ya na ihe dịka spatula ma ọ bụ mma butter. A na-etinye akwa ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na nke a, ma tinye ya n'ime anụ ahụ. Mgbe ahụ, ihe mgbochi ahụ na-agba ọsọ ọsọ megide ntuziaka nke ntutu. Daysbọchị ndị a, a na-enwekwa wax siri ike, ebe a ga-adọkasị wax ahụ na-ejighị akwa. Enwere ike inwe ụfọdụ nsogbu. Iji malite, nsị nwere ike iduga n'ọbara na akpụkpọ. Enwere ike inwe mgbakasị ahụ, mmegharị na mmeghachi omume nfụkasị ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na ị ga-emegharị usoro ahụ, ihe mgbu nwere ike ịbụ ihe na-adịgide adịgide.
Ndụmọdụ: Zere kpam kpam ịme ntutu ihu, ma ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ anụ.
Ajụjụ: Otu esi ewepu ntutu ihu na-adịgide adịgide
Ajụjụ: Gịnị bụ ndepụta nke Ferriman-Gallwey? Kedu ka o si metụta ikpochapụ ntutu ihu?
TO: N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụ ndepụta ebe a na-agbakọ ogo hirsutism ma ọ bụ usoro ntutu nwoke maka ụmụ nwanyị. Edere na 1961, ihe ndeputa nke mbụ ya lere anya na akụkụ ahụ 11 na ụmụ nwanyị, na-atụle ntutu site na efu (enweghị ntutu isi) ruo anọ (ntutu dị ukwuu). Emechara ka ọ̀tụ̀tụ̀ a dịkwuo mfe. Nzuzo a, ndeksi ahụ nwere ugbua onyonyo nke nkesa ntutu na ihu dịka obi, obi, afọ, aka na ụkwụ. Akara nke asatọ ruo 15 na-egosi nkịtị hirsutism dị nwayọọ ebe akara karịrị 15 na-egosi oke ntutu.
n'elu gosiri ihunanya fim Hollywood
Ajụjụ: ike hirsutism ma ọ bụ oke ntutu ihu na-egosi PCOS?
TO: Mgbaàmà a na-ahụ anya dị ka hirsutism na-eme ka ọ dị mfe ịchọpụta PCOS. Ọ bụrụ na ị na-etinye oge dị ukwuu na ịme waksị, na-eri eri ma na-apụ apụ, ma ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ dị na agba gị na-eche ọfụma oge niile, enwere ike ị nwere ike ileghara isi okwu nke PCOS anya. Ọgwụgwọ maka PCOS yana ọgwụgwọ laser nwere ike belata uto ntutu nke ukwuu. Mgbalị a niile nwere ike inyere gị aka iwepụ ntutu ihu kpamkpam.
nkọwa kacha mma maka ezigbo enyi m
ụdị yoga asanas nwere foto
esi ewepu ntutu daa
kacha mma n'anya nkiri niile oge
esi eji mmiri soda mee ka anụ ọcha